🥇 ▷ Fortnite: xiddig superstar ah ayaa ka baxaya Twitch ✅
Fortnite: xiddig superstar ah ayaa ka baxaya Twitch
Dhowr maalmood kahor dhamaadka Koobka Aduunka Fornite, wararka ku saabsan ciyaartan caan ah ayaa wali sii socota. Tijaabada “Ninja” Blevins, oo loo tixgeliyo inuu yahay superstar-ka Fortnite, ayaa maanta ku dhawaaqay inuu ka fariistay shaqada Twitch, madal socodka Amazon, halkaas oo uu kula wadaago taageerayaashiisa dhammaan cayaaraha uu qabto.
Ka tagida Ninja ee ‘Twitch’ ‘maahan aafo la’aan. 28 jirka reer Mareykan ayaa go’aansaday inuu saldhigiisa u wareego Isku darka, taasi waa, tartanka. Degelkan qulqulka leh waxaa iska leh Microsoft, oo ah shirkad siisay lacag aad u tiro badan xiddigihii reer Fortnite Sidaas darteed waxay ku socotaa feylashaada.
Sanadkii la soo dhaafay, “Ninja” wuxuu qirtay inuu kasbaday 10 milyan doolar sanadkii pama idaacadooda ku daabacan barta Twitch. Microsoft waa inay dhaaftay xaddiga sidaas darteed saamileyda ayaa aqbali doona inuu dhinac ilaa dhinac uga socdo. Oo taas kaliya ma aha, wuxuu ku qasbay inuu ka go’ay inuu ciyaaro waqti buuxa Fortnite.
Sida haddii ay ahayd superstar kubada cagta ah
Adigoo mara koontadaada TwitterTyler Blevins wuxuu ku dhawaaqay inuu ka tagayo ‘Twitch’ by Mixer, oo ah madal bixinta lagu bixiyo oo ku takhasusay ciyaaraha. “Ninja” ayaa gudbiyay warkiisa sidii isagoo jooga shir saxaafadeed; Wuxuu ku sifeeyay suxufiyiinta goob joog ka ahaa ku dhawaaqidiisa qaaska ah.
Waan ogahay inay tani dad badan ku argagaxin karto, laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaan si toos ah ugu qulqulayaa shirkadda ‘Mixer’. Waan ogahay, waan ogahay, inay tahay wax xiiso leh. ”, ayuu yidhi xiddigga reer Fortnite fiidiyowga uu ku wadaagay shabaqa shimbiraha buluugga ah.
Cutubka xiga, https: //t.co/lvn9KBjEYq pic.twitter.com/tljVgyM3bG
– Ninja (@Ninja) Ogast 1, 2019
Blevins wuxuu yiri in la qabsashada aaladda Microsoft waxay noqon doontaa a Ku noqo xididada socodka. Isaga oo tixraacaya Beam, magaca Mixer hore u lahaa ka hor intaadan iibsan shirkadda tikniyoolajiyadda ee ku taal Palo Alto.
Baaskiilka Ninja ee loo yaqaan ‘Mixer’ ayaa caqabad ku ah adeegsadayaasha cusub ee qulqulka. Tani waxaa horey loo xaqiijiyey daqiiqado ka dib markii lagu dhawaaqay Blevins; Appku wuxuu ahaa kan ugu hooseeya App Store. Guul taas oo, xaqiiqdii, xaq u siineysa maalgashiga milyaneerka ah ee ay Microsoft ku sameysay wabiga.
Ameerikaanka midabkiisu kala duwan yahay Waxay ku leedahay YouTube milyan 15 milyan oo taageerayaal ah iyo inka badan 22 milyan oo Youtube ah. Laga bilaabo isbuucaan, qof walba wuu u gudbi doonaa Isku qas inuu sii wado araggiisa sanam ee Fortnite, kaasoo hadda ku habboon madal.
Sida Twitch, Mixer wuxuu leeyahay adeeg lacag ah, kaasoo ku kacaya $ 8 bishii. Saddex doolar ka badan goobta qulqulka Amazon. Dhanka farsamada, bogga Microsoft waa inuu guuleysto, maadaama aysan soo bandhigin wax dib u dhac ah oo ku saabsan gudbinta ciyaaraha.
Xiddiga reer Fortnite ayaa ka tagaya Twitch isagoo ka tagaya rikoor dhan: In kabadan 630 kun oo qof ayaa daawaday ciyaartii ay la ciyaareen Kim Dotcom, taasoo ka dhigeysa inuu yahay isha ugu daawashada badan taariikhda. Miyaad ka gudbi doontaa muuqaalkaaga Mixer?
Waxa kale oo aad xiisayn kartaa: